Falanqeeyayaashu waxay tilmaamayaan in IPhone ka yar uusan noqon doonin mid dhaqan gala | Wararka IPhone
Falanqeeyaha saddexaad ee Apple ayaa sheegay in iphone-ka yar uusan shirkadda ka caawin doonin
Piper Jaffray's Gene Munster, wuxuu aaminsan yahay xanta ku saabsan iPhone-ka hoose ee dhammaadka leh shaashad yar, runtii macno weyn ugama fadhido Apple, inkastoo xaqiiqda ay u muuqato inay jirto dalab xoog leh oo ka imanaya dadka isticmaala taleefannada casriga ah ee shaashadaha ka yar 5 inji.
Qoraal la daabacay Jimcihii, Munster wuxuu qoray xog tilmaamaysa taas Apple waxay ku shaqeyn kartaa qalab cusub oo 4-inji ah si loo sii daayo sanadka soo socda, iyada oo la xaqiijinayo qaar ka mid ah warbixinnadii hore ee ku saabsanaa nooca yar ee iPhone-ka, kaas oo la wici karo iPhone 6c.
Isla qoraalka ayaa sidoo kale la wadaagay ra'yiururin gudaha ah oo uu sameeyay Piper Jaffray oo muujinaya intaas in kabadan 20% dadka isticmaala taleefannada casriga ah waxay yiraahdaan waxay doorbidayaan cabbirka shaashadda oo 4-inji ahs, oo muujinaysa inay tahay cabirka ugu wanaagsan ee taleefannada casriga ah. IPhone 5s wuxuu lahaa shaashad 4-inch ah, halka iPhone 6 iyo 6 Plus loo hibeeyay shaashad dhan 4,7-inji iyo 5,5 inji.
Laakiin Munster wuxuu bixiyay seddex sababood oo uu sidaas ugu maleynayo IPhone yarna runtii Apple ma caawin doono hab macno leh:
Macaamiisha runtii ma rabaan qalabka ugu yar: Munster wuxuu qoray in 20% dadka isticmaala taleefannada casriga ah ee sheegay inay doorbidaan 4-inch shaashadood, ay tahay si fudud maxaa yeelay wali waxay adeegsanayaan moodellada hore ee iPhone-ka. Wuxuu rumaysan yahay in markay cusbooneysiiyaan nooca 4,7-inji ah, inay ogaan doonaan in jiritaankooda dhabta ah ee jeebka uusan wax badan iska beddeli doonin. Xaqiiqdii, 58,4% jawaabeyaasha gudaha waxay muujiyeen in midka weyn ee iPhone 6 ama 6 Plus uu leeyahay cabirka shaashadda saxda ah.
Dadku dan kama lihi midabada kala duwan: Munster wuxuu leeyahay muuqaalka ugu weyn ee iPhone 5c, qaabkii ugu dambeeyay ee iPhone-ka hooseeya, wuxuu ahaa midabyo kala duwan. Laakiin taasi waxay noqotay 'aan loo baahnayn macaamiisha badankood«, Maxaa yeelay qaar badan oo ka mid ah waxay u isticmaalaan taleefannadooda kiisaska. Cunsurka kaliya ee kicin kara iibinta iPhone 6c wuxuu noqon lahaa cabirkiisa yar, oo uu rumeysan yahay inaysan muhiim ahayn.
Qiima jaban ma noqon laheyn: Warbixinadii hore ee ku saabsanaa iPhone 6c waxay tilmaameen inuusan yareyn oo kaliya, laakiin sidoo kale ka raqiisan yahay, leh qiimahiisu waa $ 450 halkii qalab. Laakiin Munster wuxuu xusayaa in heerarka Apple ay aad u sarreeyaan si ay hoos ugu dhigaan qiimaha sidaas u hooseeya, haddii aad sidaas sameysana waxay noqonaysaa "wax ka beddel falsafadda Apple." IPhone 5c wuxuu lahaa qiime bilow ah $ 549.
Xaqiiqdu waxay tahay in aaladda ay run tahay iyo in kale aysan macno lahayn. Kama fileynayno in Apple ay iibiso qalab aad u tiro badan oo iPhone 6c ah marka loo eego nooca hoose ee caadiga ah iyo in aagagga aan la fileynin inuu si weyn uga duwanaan doono sidoo kale. "
Dhanka KGI, Ming-Chi Kuo, oo ah falanqeeyaha sare ee Apple, ayaa khamiistii qoray moodel yar oo iPhone ah ayaa laga yaabaa inuu la yimaado qaybo ka mid ah isla noocyada iPhone 6s, oo ay ku jiraan processor-ka A9. Wuxuu qoray in lagu qiimayn karo $ 400 ilaa $ 500, oo lagu bartilmaameedsanayo suuqyada soo koraya iyo macaamiisha miisaaniyada yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Falanqeeyaha saddexaad ee Apple ayaa sheegay in iphone-ka yar uusan shirkadda ka caawin doonin
Apple ma u baahan tahay caawimaad? Waa maxay cinwaan ...
Sida haddii US $ 400 ama US $ 500 ay ahaayeen wax laga heli karo suuqyada soo koraya. Tusaale Uruguay, iphone 5c maanta wuxuu marayaa inta udhaxeysa US $ 380 iyo US $ 420.
Ku jawaab amadeusuy
Waxaan ku maaweelinayaa sida kali talisnimo ah falanqeeyayaashan seddex ilaa afaraad ... waxaan kaliya ubaahanahay inaan kudhameeyno falanqeyntooda: I SAID.
Aniga qudhaydu waxaan haystaa iPhone 6s waxaanan tebayaa cabbirka 5ta, haddii bishii Janaayo ay sii daayeen iPhone 6c oo la mid ah kan 5s laakiin qalabka hadda jira, waxaan iibiyaa 6-yadayda oo waan iibsadaa, si hagar la’aan ah! Anigana siddayda, in kabadan hal waan ogahay, laakiin waxba ma ahan, diyaar garowga waajibaadka wuxuu goaansaday inaanan jirin, inaan dhamaanteen doorbideyno surwaal iyo taleefano aan ku isticmaalno laba gacmood ... si fiican, araggu waa aamin.
Sida gabi ahaanba loo tirtiro xisaabtaada Instagram